Xildhibaanka bariga Suna oo sheegay in ilaaladiisi loo soo celiyay – The Voice of Northeastern Kenya
Xildhibaanka bariga Suna oo sheegay in ilaaladiisi loo soo celiyay
Xildhibaanka laga soo doortay degaanka bariga Suna ee ismaamulka Migori Junet Maxamad ayaa sheegay in loo soo celiyay ciidamadii ilalinayay.
Mudanahan oo sido kale ah sarkaalka dhanka mucaaradka Nasa u qaabilsan kala dambeynta baarlamaanka ayaa maanta oo isniin ah ka dhawajiyay in sarakiishii ilaalada u ahaa ay la soo xarireen oo ay u shegeen inay shaqada soo galayaan.
Hoggaamiyaha mudanayaasha laga tirada badanyahay ee baarlamaanka John Mbadi ayaa isna xaqiijiyay in darawalkiisii uu soo wacay oo uu u sheegay inuu baarbuurta soo qadaya in kastoo uusan faahfaahin ka bixin in ilaaladiisa loo soo celiyay.
30-kii bishii jannaayo ee sanadkan oo uu hoggaamiyaha mucaaradka Nasa Raila Odinga isku dhaariyay madaxweynaha shacabka ayay ahayd markii dowlada ay xildhibaano ka tirsan mucaaradka kala laabatay ilaalada.
Xubnahasi ayaa lagu eedeyay inay ku lug lahayeen dhaarintii Raila Odinga.
Hasa ahaate tallabadaasi ayaa muran ka dhex dhalisay baarlamaanka iyadoo lagu wareejiyay Justin Muturi oo ah guddoomiyaha golahaasi sharci dejinta.
Kalonzo Musyoka oo ah madaxa xisbiga Wiper ayaa isna maalintii uu isdhaarinayay Raila sheegay in lagala laabtay ciidamadii ilaalinayay.
← In ka badan 30 kiis oo racfaan ah oo maxkamada la geeyay
DHAGEYSO Waxgaradka Mandhera oo soo dhaweeyay kulankii madaxweynaha dalka iyo hoggaamiyaha Nasa →